Ball iibheringi, Motor iibheringi, iibheringi nomakhi, Good Umgangatho iibheringi - Anrui
iibheringi ibhola emseleni Deep
iibheringi roller Tapered
Okunye iibheringi wena
Ukudlulisela izixhobo iibheringi
iibheringi isixhobo Household
Anrui Holding Group Co., Ltd., Inkampani iqela a inxaxheba iibheringi ngokuniguqula, unyango ubushushu, ukugaya kunye nebandla ngokunjalo iibheringi besila imveliso umatshini brand yethu WWI. Ngenxa iibheringi nzulu groove ibhola umenzi wobungcali, siye ukulawula umgangatho yethu eziphathekayo, inkqubo imveliso ekupheleni. WWI iibheringi asetyenziswa ngokubanzi imoto, motor-isithuthi, inkqubo yokuthutha, ikheshi kunye ezizihambelayo, izixhobo zombane zasekhaya, motor enyukliya njl ukwenza ihlabathi ejikelezayo ngokuthembekileyo.
Siya banike isiqinisekiso unyaka 1 phantsi kweemeko zomsebenzi eziqhelekileyo. Kuphela ukuba ayiphumelelanga okubangelwa ethwele umgangatho ngonyaka, WWI angathanda ukubuyisela elibizwa akuphumelelanga ukuthwala entsha enye ukuya kwenye.
Factory yethu ikhule ibe iNkulumbuso ISO / TS16949: 2009 umenzi engqiniweyo yobunjani ephakamileyo, Ixabiso-Effective iimveliso
WWI kuyinto professional iibheringi umenzi. Thina ngokupheleleyo babe mveliso 6 ibekwe Huangshan, Hangzhou, Hubei ngokulandelelanayo.